SAWIRRO: Duqa Magaalada Muqdisho Cumar filish oo wareejiyay furaha guri 30-sano. – Xogsoor News Network
Professor cabdisalan Garaad Malla Dawladu Xaqbay Uleedahay Sugida Xuduudaha Dalka(waraysi)
Ugaas Maxamed Wali oo laga raray hoteelkii ay Dowlada Somaliya ka dejisay Muqdisho
Dalka Shiinaha oo Tuhun ka muujiyey faafista Cudurka Korono Feyris in uu ka danbeeyo dalka.
DEG DEG: Madaafiic goor dhow lagu weeraray Garoonka Aadan cadde iyo Xarunta Xalane.
wax ka ogow Qorshaha ciidanka Xooga dalka Somaliya loo geeyay Gobolka Gedo.
Wasiir Maareeye oo ka soo dabcay mowqifkiisii ahaa.
SAWIRRO: Farmaajo oo aqbalay marti-qaad uga yimid Uhuru iyo kulankii Villa Somalia oo war laga soo saaray
ODAWA: Nidaamka Farmaajo waxa uu dalka ku soo kordhiyay inta lagu dulmiyo hadana.
Maamulka Puntland oo hakad galiyey Shaqada Shirkadaha ka howlgala.
SAWIRRO: Duqa Magaalada Muqdisho Cumar filish oo wareejiyay furaha guri 30-sano.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa 30-Sano kadib muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Xasan ku wareejiyay guri uu wakiil uga ahaa Muwaadin Cabdala Cabdiraxmaan Alboosi oo si sharcidara ah hantidiisa looga heestay.
Wareejinta gurigaan kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir masuuliyiinta degmooyinka Xamar jajab iyo Xamar Weyne sidoo kale taliyaha Saldhiga degmada Xamar jajab kormeer ku sameeyeen qeybaha uu ka kooban yahay gurigan oo ay ka muuqdeen burbur iyo dayac xoogan.
Marnaba ma aqbali doono in qof muwaadin ah hantidiisa sharcidara lagu heesto waxaana ugu baaqaya qofkaste oo hantidiisa ama gurigiisa sharcidara lagu heesto in uu nala soo xariiro si aan xaquuqdiisa ugu soo dhicino, sidoo kale waxaan digniin adag u diraaya cidkaste oo dagan guri aysan laheyn ama xoog ku heesta hanti uusan laheyn in uu dib isaga wareeji hadii kale sharciga ayaan la tiigsan doona”.
Wakiil Cali Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay cidkaste oo qeyb ka qaadatay in si cadaalad ah ay dib ugu helaan gurigoodi oo muda fog gacantooda uga maqnaa sifa sharcidara ah.
DAAWO:-Khilaaf soo kala dhexgalay Baarlamaanka Puntland iyo
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa madaxweyne Deni ku eedeeyay, in uu ku ciyaaray Hab-maamuuskii dowladnimo, kadib markii uu kusime ka dhigtay wasiirkiisa Caddaaladda. Abuukaate Ismaaciil oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Garoowe, ayaa sheegay in haddii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisu dalka ka maqan […]
Nin Al-Shabaab u ‘farsameyn jiray qaraxyada’ oo la xukumay
Wasiirka Ganacsiga Somaliya oo kulamo ka wada dalka..
Madaxweyne Mustafa Cagjar oo Magaalada Jigjiga dib ugu soo noqdey.
Axmed Madoobe oo Xabsiga utaxaabey Nin xil wasiirnimo u doontay.
Raisul Wasaare xilka haya oo loo Maxkamadeynayo ku lug lahaashaha dilka xaaskiisa
Itoobiya Oo Ka Baxday Heshiiskii Maalgashiga Dekeda Berbera Ee Ay 19%-ka Ku Lahayd